'Tsy mahay na inona na inona aho' - Maninona no lainga lehibe io - Blog
Tsy mahay zavatra aho…
Raha zavatra nolazainao taminao tato ho ato ity dia mijanona.
Atsaharo izao dieny izao satria banga be izany.
Fantatrao ve fa ankoatry ny narcissists sy ny sociopaths mirehitra dia mijaly avokoa ny olona rehetra any aretin-tsaina ?
Ny olon-tokana tsirairay eto ambonin'ny planeta dia mijaly amin'ny karazana olana momba ny fahatokisan-tena na hafa.
… Saingy vitsy no hanaiky izany.
andrew dice tanimanga vady eleanor
Ny haino aman-jery sosialy dia manana fampiasana be dia be, fa mety hanimba be an'ireo izay milatsaka amin'ny fahombiazan'ny hafa ihany koa.
Ny ankamaroan'ny olona dia tsy mahatsapa fa ireo lahatsoratra Instagram sy Pinterest tonga lafatra ary ny fireharehan'ny Facebook dia tena voahaja tsara.
Ho an'ny cupcake voaravaka tsara (mampientanentana) rehetra aseho dia misy am-polony farafahakeliny izay mitovy amin'ny anjely anjely mandoa fanala amin'ny endriny rehetra.
Ny sarinà zazakely iray faly sy natory dia nalaina nandritra ny fiatoana dimy minitra taorian'ny herinandro nikiakiaka tsy nisy fitsaharana sy alina tsy natoriana.
Tsy te hanaiky ny tsy fahombiazany sy ny fahalemeny fotsiny ny olona satria samy miezaka mafy be isika mba hahomby amin'ny zavatra, na inona na inona, vetivety fotsiny.
Ny hany fantatsika momba ny olon-kafa dia izay nofidian'izy ireo hizara.
… Ary zara raha fanehoana lalina ny hoe iza marina izy ireo, sa izao?
Ilay olona heverinao fa manan-talenta indrindra hitanao hatrizay dia mety hiady amin'ny aretina sarotra na fahasahiranana ara-bola mafy.
Ireo izay ankafizinao dia mampitaha ny tenany amin'ny hafa koa, ary manana ny fisalasalany momba ny tenany sy fahatsapana ho tsy misy dikany koa…
Ka raha azonao atao, dia miezaha hiala amin'ilay kodiarana ary atsaharo izany boribory ratsy tarehy izany.
Tsara daholo isika Misy zavatra
Raha maka fotoana kely hipetrahana amin'ny fahanginana sy mangina ianao ary tena manao ny marina amin'ny tenanao, dia hahita zavatra mahatalanjona izay tena hainao tokoa ianao, tsy isalasalana.
Mety tsy ho zavatra iray hakanao sary ianao raha te hahazo 'sitraka' amin'ny mombamomba ny besinimaro na mety - mety ho talenta na fahaiza-manao malemilemy izay mety ho fantatry ny sasany aza.
… Fa zavatra izany ianao irery mahay manao.
Azonao atao ve ny manendy quiche tonga lafatra? Manana fahaizana mampitony ireo biby nitaiza ve ianao rehefa matahotra izy ireo? Mamboly zavamaniry hamboly amin'ny tany simba? Zana-tsipìka manidina?
Angamba ianao mahay ny fiteny, na mahatsapa ny fihetsem-pon'ny olon-kafa ampy hanehoana fangorahana na fangorahana tena izy.
Manaova ny marina amin'ny tenanao, ary manandrama mivoaka ivelan'ny vatanao ary jereo ny fahitan'ny hafa anao vetivety.
Aza mino izay rehetra eritreretinao
Ny saintsika manokana dia mety ho fahavalontsika ratsy indrindra, indrindra rehefa mamaky tampina isika.
Ny fahasosorana, ny fihenan'ny fiainanao manokana na ny asanao, ary ny olana eo amin'ny fifandraisana dia afaka manary antsika any ambany avokoa tadin'ny fankahalana tena ary ny famerenana amin'ny laoniny.
Saingy amin'ireto fotoana ireto no ilantsika fangorahana indrindra amin'ny tenantsika.
romana manjaka mpiara-miasa ambrose dean
Ny ankamaroantsika dia manana fanantenana tsy azo tanterahina ho an'ny tenantsika fa tsy hanonofy hanana olon-kafa mihitsy isika, saingy mora kokoa ny mangoraka sy malemy fanahy amin'ireo olon-tiantsika noho ny fanehoana izany hatsaram-panahy sy hatsaram-panahy izany ihany amin'ny tenantsika.
Fantatrao ve hoe inona no tena manampy mandritra ny fotoana toa ireny?
Mitodika any amin'ireo izay tia anao amin'ny fanamafisana tsara.
Manomboha antontan-taratasy iray banga ary apetaho ao aminy ireo zavatra mahafinaritra rehetra nolazain'ny namanao taminao mba hahafahanao mamaky indray ireo sombim-panomezana sy fampaherezana isaky ny mila azy ireo ianao.
Raha mahazo aina ianao amin'izany, dia afaka mandroso lavidavitra kokoa aza ianao ary manao ny marina amin'ireo olona akaiky anao momba ny zavatra tsapanao, ary angataho izy ireo hampahafantatra anao momba ny zavatra tian'izy ireo na ankafizinao momba anao.
Tsy isalasalana fa ho gaga ianao (raha tsy tototry ny tototra sy misavoana tampoka, na dia amin'ny fomba tsara aza) momba ny halehiben'ny eritreritra anao ao amin'ny faribolanao.
Ny ampahany tsara indrindra amin'ny fanaovana zavatra toa izao dia azonao atao ny mamaly.
Fantaro tsy misy isalasalana fa ny olon-kafa manodidina anao dia mahatsapa ny fomba nitovizanao tamin'ny fanoloranao zavatra tsara na famporisihana anao mety hanosika azy ireo hiala amin'ny quagmire-ny.
Raha mahatsiaro ho adala ianao dia handresy lahatra anao izany fa tsy izany ianao
Ahoana ny fomba hahalalana ny kompania ambany (ary ny dingana 5 handresena azy)
Atsaharo ny toe-panahin'ireo niharam-boinao tamin'ny alàlan'ireto dingana 5 ireto
Ny fanaovana izay tianao dia zava-dehibe kokoa noho ny fahalavorariana
Raha tsy mbola fantatrao ny momba ny Wabi Sabi , Zahao hahitanao azy. Izy io dia foto-kevitra japoney miorina amin'ny hatsarana izay misy amin'ny tsy fahalavorariana sy ny tsy fahatanterahana.
Izay tiantsika sy ankafizintsika dia tsy tokony ho 'lavorary' vao ho mahafinaritra, tsara tarehy ary ankasitrahana.
Mety mihazona ny tenanao amin'ny fenitra lavorary avo lenta amin'ny fahalavorariana ianao amin'ny lafiny zavatra ankafizinao atao, ary toy izany, manary ny fifaliana amin'ny fanaovana azy ireo.
Miezaha hiala amin'izany ary mankasitraka ny fanaovana azy amin'izao fotoana izao fa tsy ny valiny farany.
Raha tianao ny manao sary, na mandoko, na manja, na manoratra, tsy maninona na miafara amin'ny sangan'asa iray izay hahamenatra an'i Caravaggio, na ilay tantara lehibe indrindra nosoratana.
… Ny zava-dehibe dia hoe manao zavatra tianao ianao, ary izany dia mahasambatra anao.
Fantatrao ve izay mitranga rehefa mandany fotoana sy ezaka ianao zavatra mahaliana anao ?
Mihatsara ianao amin'izany.
Ny karazana fanazaran-tena rehetra dia hanampy anao hanatsara ny fahaizanao ary izany dia hampiorina ny fahatokisanao an'io lohahevitra io.
mariky ny fitiavan'ny olona iray
Raha sahirana ianao mianatra fiteny iray, andramo ny mijery sarimihetsika amin'io fiteny io - mety ho gaga ianao mahita fa mahafantatra teny maro kokoa noho ianao mety nanome voninahitra ny tenanao.
Ianao ve efa niroso tamina fandrafetana ary nanao mpihinam-borona Winky nefa tsy nisy zoro mahitsy? Ataovy mihantona any ivelany ihany izany, ary miomàna hitsikitsiky ny tena fotony, rehefa tonga ny sakaiza volom-borona rehetra hihinana sakafo, feno fankasitrahana fa nisy olona nikarakara tsara hametraka voa ho azy ireo.
Manaova resaka marina amin'ny tenanao
Mety maniry ny hipetraka ianao ary ho marin-toetra momba ny zavatra ezahinao hanatanterahana azy, ary ny antony mahatonga anao mafy be amin'ny tenanao.
Mikendry ny hahatratra tanjona manokana ao anatin'ny fe-potoana iray ve ianao ary mahatsapa fa tsy mahavita an'izany?
Raha izany dia mety ho hevitra tsara ny hijerena ny zava-misy amin'ny zavatra azo tratrarina, ary aparitaho kely kokoa io timeline io.
Mahatsiaro ho kivy be ve ianao amin'ny zava-drehetra?
Mety ho sahirana amin'ny fahaketrahana ianao na ny tsy fahampian'ny vitamina miresaka amin'ny mpitsabo anao dia mety hanampy amin'ny famahana vahaolana hamoahana anao amin'izany fialamboly izany.
Zavatra iray hafa tokony tadidio dia ny mety tsy mbola nahitanao ny tena fahaizanao.
Raha sorena ianao amin'ireo ezaka isan-karazany narotsakao, manandrama mandeha amin'ny lalana hafa tanteraka ary manandrama zavatra vaovao tanteraka.
Andramo ny kilasy fandrahoan-tsakafo, mandihy mikotroka, manao sary sokitra, manao zaridaina… na inona na inona izany dia ilay mifanohitra amin'ny tendrontany izay hitanao izao.
ahoana no fomba ilazana fa miala tsiny aho amin'ny famoizanao
Indraindray ny fahasosorana amin'ny tsy fahombiazana amin'ny lohahevitra dia avy amin'ny ennui.
Reny Theresa nanana teny hendry holazaina momba ny fahalehibiazana, ary na dia mety tsy hitovy amin'ny zavatra resahintsika aza ny zava-misy, dia tena marina ny fihetseham-po:
Tsy isika rehetra no afaka manao zavatra lehibe. Saingy afaka manao zavatra kely amin'ny fitiavana lehibe isika.
Raha manao izay tianao ianao, ary mitondra fifaliana ho anao (ary mety ny hafa), dia ampy izay.
IZAO dia ampy.
Inona no maha samy hafa ny fitiavana sy ny firaisana ara-nofo ny fanaovana
maninona aho no misaraka foana amin'ny sipako
inona no dikan'izany rehefa misy lehilahy mibanjina lalina ny masonao
wwe manomboka be ny lalàna
mahatsiaro mankaleo foana aho